IKillashee Hotel - IntoKildare
IKillashee Hotel itholakala kuphela ku-30km ukusuka eDublin City kanye no-2km nje ngaphandle kwedolobha laseNaas. Ihlelwe phakathi kwezindawo ezisemaphandleni eziluhlaza ze-County Kildare, iKillashee iyindawo ekhethekile futhi asikwazi ukulinda ukuyabelana nawe nomndeni wakho. Ukusuka ebuhleni bukaVictorian beNdlu yoqobo, kuya kumahektare wezingadi ezinhle kakhulu kanye namahlathi asendle akhanyayo nemikhondo, kunezindawo eziningi ezifihliwe ongazihlola. Isilungiselelo esithandekayo ngempela, esinomlando ocebile ngokumangalisayo, lokho kusalindwe ukutholakala.
Kusuka ezindlini zokuvakasha eziqokwe kahle ezihhotela eziya ku-141 ukuya ezinsizakalweni ezihlinzekwa yiLeisure Club ezinedamu lokubhukuda elingama-25m, i-sauna, igumbi lesitimu, iJacuzzi nendawo yokuzivocavoca enezinto ezigcwele futhi neKillashee Spa enhle enamakamelo okwelapha kanokusho angu-18, kukhona kuningi okuzokutotosa futhi kuningi ongakuthola. Indawo yokuzola, iKillashee Spa ingukuphumula okuphelele futhi kuyinjongo yeKillashee Spa ukukuletha ohambweni lwenhlalakahle ephelele yomzimba, ingqondo nomphefumulo.
Ihhotela linezindawo zokudlela ezimbili. Indawo yokudlela yaseTerrace inikeza isipiliyoni esihle sokudlela esibheke izingadi zomthombo futhi ivulwa nsuku zonke iphaka itiye nedina lantambama. IBistro & Bar inikela ngesipiliyoni sokudlela esingajwayelekile ngokwedina nakuma-cocktails. Indawo yokugcina izinto ehlala ikhaya leKillashee Coffee Dock yetiye / ikhofi lakho, ama-scones, amaqebelengwane kanye nokulunywa okulula. Jabulela ikhofi elizokhipha futhi welaphe ukuletha ohambweni lwakho uzungeze ifa.
Kunemisebenzi eminingi efeni elihle laseKillashee kufaka nezindlela ezihamba ngezinkuni. I-Estate Maps iyatholakala ekwamukelweni noma kungani ungaboleki elinye lamabhayisikili ethu ancoma bonke abavakashi. Thatha uhambo lokuphumula udabule i-Fountain Gardens enhle, i-Emma Butterfly Garden ngokubambisana ne-DEBRA Ireland, iTeddy Bear Picnic Garden noma iFairy Forest ne-Playground yethu entsha. UKillashee unoJohnny Magory - Irish Wildlife & Heritage Trail Wezingane. Ngemisebenzi emi-4 esizeni ehlotshaniswa noJohnny Magory efeni lehhotela kuqinisekisa ukuthi uvakashelwa umndeni ngomlingo eKillashee.
Amahhotela, Ukunethezeka, Umndeni Friendly, Amahhotela e-Spa, Amachibi okubhukuda, Izinkundla Zomshado, Naas
Umgwaqo weKilcullen, Naas, Isifunda iKildare, W91 DC98, Ireland.